Center Control, inona izany ary ny fomba fiasany | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo zava-baovao nampiharin'i Apple amin'ny iOS7 vaovao, izy ve Ivon-toerana fanaraha-maso. Amin'ny alalàn'ity endri-javatra vaovao ity dia azontsika atao ny miditra mivantana (tsy mila mivezivezy amin'ny menus) mankany amin'ny Wi-Fi, Bluetooth, Do Not Disturb function, famantaranandro, ankoatry ny toe-javatra hafa.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny Control Center amin'ny iPad amin'ny iOS 7
Amin'ny alàlan'ny default, afaka miditra amin'ny Ivon-toerana fanaraha-maso avy amin'ny efijery mamoha, avy amin'ny efijery an-trano, na avy amin'ny fampiharana mandeha. Mila miala fotsiny ny rantsan-tananantsika avy eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery miakatra isika. Ny efijery tokana izay tsy azo kilemaina dia amin'ny alàlan'ny efijery an-trano. Raha miditra amin'ny Settings, Control Center isika, dia afaka manafoana ny fidirana amin'ny alàlan'ny efijery mihidy sy amin'ireo rindranasa.
Inona avy ireo safidy azoko idirana ao amin'ny Center Control
Ao amin'ny faritra havia amin'ny Center Control, ho hitantsika ny fanaraha-maso playback mozika. Raha mitendry mozika isika dia ho hita ny hira izay milalao amin'io fotoana io. Azonao atao ny mandroso haingana ireo hira, mandingana ny manaraka, miato kely. Etsy ambanin'ireo bokotra voatendry amin'ny filalaovana mozika dia ho hitantsika ny volantsika, hampisosa ny rantsan-tànantsika avy amin'ny ankavia miankavanana na ny mifamadika amin'izany, hampiakatra na hampidina ny feo isika.
Eo afovoan'ny Control Center, ho hitanao ny safidy lehibe indrindra hampifandraisana na hampiatoana: Maody fiaramanidina, Wi-Fi, Bluetooth, Aza manakorontana ary ny hidim-pivoarana Orientation. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo kisary samihafa, ny safidy voafidy dia hifandray na hongotana.
Eo ambanin'ireto safidy dimy ireto ihany, miankina amin'ny kinova iPad azonao, safidy roa hafa no hiseho na tsia: AirDrop sy AirPlay. Raha manana iPad 2 na iPad 3 isika dia tsy hiseho io fiasa io satria tsy manohana azy io. Raha tsindrio ny AirDrop dia hiseho ny menio ahafahantsika misafidy ireo rakitra, sary, horonan-tsary, fifandraisana ... izay tianay halefa amin'ny alàlan'ity rafitra vaovao ity ao amin'ny iOS. Ny fiasa AirPlay dia miasa toy ny tamin'ny iOS taloha. Raha manana Apple TV na fitaovana AirPlay hafa ianao, mifandray amin'ny tambajotra iray ihany, dia azonao atao ny milalao ny atiny iPad amin'io fitaovana io.
Farany, amin'ny ilany ankavanana, hitantsika ny famantaranana amin'ny famantaranandro (miaraka amin'ny safidiny avy toy ny alarm, countdown ary timer) ary amin'ny fakantsary. Amin'ny fipihana ny bokotra fakan-tsary dia hidirantsika mivantana haka sary na horonan-tsary. Etsy ambany fotsiny raha apetrakao ny fifehezana ny famirapiratana. Ny safidy tsara indrindra dia ny fananana azy ho azy foana, fa raha mila mampiasa azy isika na inona na inona, dia eo am-pelatanantsika izy io.
Ny mpampiasa tsirairay dia samy manana ny fampiasana azy amin'ny iPad. Misy ireo izay mampiasa azy io indrindra hivezivezy, hanamarina mailaka, hamaky boky, Twitter, Facebook, hijerena sarimihetsika, hijerena ireo vaovao farany. Tsy ho ratsy izany ao amin'ny Azo natao namboarina ny Control Center hahafahantsika manana fidirana mivantana amin'ireo rindranasa mahazatra antsika nefa tsy mila manokatra, mitady ilay rindranasa mifanaraka aminy ary mampandeha azy. Andao hojerentsika raha amin'ny kinova manaraka dia manamarika izy ireo ary mampihatra izany.
Fanazavana fanampiny - Inona no vaovao ao amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ivotoerana fanaraha-maso ao amin'ny iOS7, inona izany ary ny fomba fiasany
Manuel Tizon Calderon dia hoy izy:
Salama, omaly nanavao ny ipad 2-ko aho ary tsy mivoaka mangarahara ity foibe fanaraha-maso ity, mivoaka fotsy!? Nijery hatraiza hatraiza aho ary tsy nahita na inona na inona, raha misy afaka manampy ahy, misaotra
Valiny tamin'i Manuel Tizon Calderon
Misaotra, luis, ka iza amin'ireo no mangarahara amin'ny 3?
Mini azo antoka, satria manana aho. Ataoko koa fa 3 sy 4 koa.
Eny, ilay mini dia manana processeur mitovy amin'ilay 2, heveriko fa noho ny fahombiazany dia toa fahatanorana efa nomanina ho ahy io ... satria ny iPhone 4S dia manana processeur mitovy ihany koa, heveriko… misaotra ny valiny luis, arahaba
Mono izany fa navelan'izy ireo hivoaka ilay 3g.
Afaka miteny amiko ve ny olona iray hoe maninona aho no tsy afaka mihaino mozika amin'ny ipad, miaraka amin'ny fifehezana ny volume dia tsy afaka maka sary fotsiny aho fa tsy afaka mamadika ny feo rehefa te-hihaino horonantsary aho.
IPhone 5c voalohany amidy dia misaotra an'i Groupon tamin'ny € 569
FIFA 14 dia efa misy ao amin'ny App Store ary "maimaim-poana" izao